Tag: drone ọrụ | Martech Zone
Tag: drones ọrụ
Ọdịnihu abụghị Ihe Na-abaghị Uru ma Ọ Dịbeghị
Tuesday, August 2, 2016 Douglas Karr
Nzuzo banyere ọdịnihu nke ọgụgụ isi, robotik, na akpaaka kwesịrị ịkwụsị n'ezie. Mgbanwe ọ bụla nke mmepụta ihe na teknụzụ n'akụkọ ihe mere eme mere ka ụmụ mmadụ nwee ohere na-enweghị njedebe maka itinye n'ọrụ ha na ihe okike ha. Ọ bụghị na ụfọdụ ọrụ anaghị akwụsị - n'ezie ha na-akwụsị. Mana ọrụ ndị ọzọ nọchiri anya ọrụ ndị ọzọ. Ka m na-elegharị anya n’ọfịs m taa ma nyochaa ọrụ anyị, ọ dị ọhụụ! Ana m ele ma na-eweta na AppleTV anyị,